» “कैलाली: दिदिको छोराले, कोहि नभएको, मौका छोपी १३ बर्षिया सपनालाई…. (भिडियो हेर्नुस)” “कैलाली: दिदिको छोराले, कोहि नभएको, मौका छोपी १३ बर्षिया सपनालाई…. (भिडियो हेर्नुस)” – हाम्रो खबर
“कैलाली: दिदिको छोराले, कोहि नभएको, मौका छोपी १३ बर्षिया सपनालाई…. (भिडियो हेर्नुस)”
2021, August 20th, Friday
हाम्रोखबर संवाददाता 432 Views
“कैलालीको जोशीपुर गाउपालिकाको सि’म्ररा’नामा आ’फनै दिदिको छोराले आफनै सानि’आमालाई कर’णि गरेका छन् । १८ बर्षका धिरज चौधरी भतिजाले १३ ब’र्षिया नाम परि’र्वतन सपना थारु’लाई कर’णि गरेका हुन । सपना र धिरजको घर नजिकै रहेको छ । पविारले बताए अनुसार घ’टना भएको दिन सपनाको बुवा उपचारको लागि ८ किलोमिटर पर जोशिपुर बजारमा अव’स्थीत अस्पताल गएका थिइ । सपनाको बुवा सं’गै सपनाको आमा पनि अस्पताल गएकी थिईन ।”
“त्यही मौका छोपेर धिरजले घरमा आई जव’रज’स्ती मुख छोपी आफुलाई कर’णि गरेको सपना बताउछिन । त्यो समयमा घरमा सपना सं’गै सपनाको भाई पनि थिए र उनले आफुले सबै कुरा देखेको र भनि’दिन्छु भन्दा आफुलाई कु’टपि’ट तथा ध’म्की दिएको बताए । यो घ’टना भईसके पछि परिवारले प्र’हरीलाई खबर गरेको थियो । प्र’हरी सं’गको बयानमा धिरजले गल्ती स्वि’कार गरेको, आफुले हा’त बा’धेर, मु’ख थु’नेर कर’णि गरेको बताएको सपनाका बुवा बताउछन् ।”
“सपना अहिले २ कक्षमा पढिरहेकी छिन । १३ बर्षिको यति कलिलो उमेरमा यस्तो भएपछि परिवार निकै नै दु’खि भएको छ । पैसा दिएर अप’रा’धिलाई निकालियो भन्छन सपनाको बुवा । बल’त्का’र गरेको हु भ’न्दा पनि उसलाई १ महिना मात्र जिल्ला का’रागा’रमा राखि छोएिको र आफुले न्याय नपाएको उनि बताउछन् । हेल्लो टिकापुर टिभीका पत्रकार अंकित उप्रेतीले पिडित परिवार सं’ग सम्ब’न्धीत बिषयमा कुरा गर्नुभएको छ । हेर्नुस भिडियो-